Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Qaraxii Bamka ee Xarunta Ganacsiga Dunida
Qaraxii Bamka ee Xarunta Ganacsiga Dunida
Magaadala New York | Febaraayo, 26. 1993
Markii ay taarikhdu ahayd 26-kii Febaraayo, bam saarnaa gaari weyn ayaa ku qarxay meel ka hooseysay qaybta loo yaqaan Tower One ee ka tirsanayd Xarunta Ganacsiga Dunida (World Trade Center) magaalada New York gudaheeda. Ujeeddada laga lahaa qaraxa Bamka 1,500 lb. gaarayey wuxuu ahaa in la burburiyo Dhismaha Koowaad (Tower One) si uu ugu dhaco Dhismaha Labaad (Tower Two), si ay ugu dhintaan kumanaan oo qofood. Inkastoo uu qaraxa aannu burburin labada dhismo, waxaa ku dhintay lix qofood, waxaana ku dhaawacmay in ka badan kun qofood, waxaana uu geystay boqolaal milyan oo doolar oo dhibaato ah.
Waxaa weerarka qorsheeyay kooxo shakhsiyaad ah ee ku lug leh al-Qa’ida, oo uu ku jiray Abdul Rahman Yasin, Ramzi Yousef, iyo dhowr kale. Lacagta hawshan loo adeegsaday waxaa bixiyey Khalid Shaikh Mohammed, abtiga/adeerka Ramzi Yousef iyo qof ka tirsan dadka ugu sarreeya ururka al-Qa’ida. Lix ka mid ah ragga ku lug lahaa weerarkan ayaa la xukumay, oo uu ka mid ahaa maskaxdii ka dambeysay, Ramzi Yousef.